अाजको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा यिनीहरु बन्दैछ, मन्त्री ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » अाजको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा यिनीहरु बन्दैछ, मन्त्री ?
अाजको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा यिनीहरु बन्दैछ, मन्त्री ?
काठमाडौं , कात्तित १५ गते । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको २१ औं दिनपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । विस्तारका क्रममा एमालेका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ठूलै संख्यामा मन्त्रीहरु सहभागी हुने भएका छन् ।
असोज २४ गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । एमाले स्थायी समितिको कात्तिक १ गतेको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । उपराष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएलगत्तै शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा पठाउने नेताका विषयमा गम्भीर परामर्श भए पनि ठोस निर्णय ननिस्केको एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।
आइतबार बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावल उपप्रधान एवं रक्षा, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन् । त्यस्तै श्रीमाया थकाली, पशुपति चौलागाई, रवीन्द्र अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, आनन्द पोखरेल, प्रेम आले, शत्रुधन महतो लगायत मन्त्री नियुक्त हुने स्रोतले बतायो , आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।